शब्दकोश: April 2011
वसन्तपुरसँग किन-किन आत्मीयता गाँसिएको छ । भीडैभीडको साम्राज्य हुने भए पनि असीम शान्तिको अनुभूति हुन्छ त्यहाँ । अझ साँझपख सुस्ताउनुको मजा नै बेग्लै । एक्लै लरखराउँदै पुग्दा पनि साथीको अँगालो फुकाए झैँ पर्खिरहेको हुन्छ वसन्तपुर । मान्छे जिन्दगीमा अक्सर एक्लै त हुने हो । यसैले वसन्तपुर जस्तो ठाउँको महत्त्व अझ बढी छ । खल्तीमा खुजुरा पैसा जस्तै जिन्दगीमा रहेका कतिपय दिक्कता वसन्तपुरकै डबलीहरूमा टहलिँदै झारझुर पारी निखारेको छु । वसन्तपुर परिसरकै मन्दिरको काठे पेटीमा बसेर कतिपय अपूरा कविताहरू छिमल्दै पूरा गरेको छु ।
आत्मीय मान्छेसँग त्यहीँ झगडा,घुर्की, गनगन र फकाउने कार्यको शिलान्यास समेत भएको अमिट स्मृति छ । वसन्तपुरको नामैले गाढा स्वाद भरिन्छ । काठमाडौँले सिता दिएको छ, केही गर्ने टेको दिएको छ । तर हामी यसैलाई गाली गरेर निठूरी हुँदै छोडिआएको गाउँको यादमा भक्कानिन्छौं । जीविकाको आधार दिने सहरलाई सत्तोसराप मात्र ! यसो हेर्दा-सोच्दा काठमाडौंमा अनेकौँ सपनासहित लाख-लाख टाउकोहरूको तनावयुक्त थपडीबाहेक केही छैन । तर वसन्तपुर, स्वयम्भू स्तुपा जस्ता ठाउँको कारण पनि काठमाडौंलाई चटक्क भुल्न गाह्रो छ ।
वसन्तपुरमा एकदिन टहलिँदा यस्तै झलकहरूले आत्मीयता साटिरहे --
जसै साँझ पर्छ, वसन्तपुरको रौनक भने झन् जगमगाउँदो बन्छ
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, April 30, 20114: Comments
आऊ, हावालाई पूजौं
गुरू थापौं हावालाई
उसका कुरा बुझौं
देखिन्न स्वाँठ हावा
यसैलाई मानौं अदृश्य शक्ति
राखौं प्रतीकस्वरूप कुनै घडा
हावामा बुरुक्क उफ्रिएर
हावाकै सुसेली काढौं
कठोर शासकको गद्दी फ्याँक्न
सडक तात्तिए जस्तै
बढारेर लैजान्थ्यो हावाले
खेतका बालीमा गुम्सिएका विषादी
कोठाको कापमा लुकिबसेको ढुसी
यसपाली हावालाई यतै खेलाइराखौं
फोहोरसँगै यतै अलमल्याइराखौं
संसारभरिका रोग, भोक र शोक
यतै थुपार्ने अनुमति दिऔं
हावा हाम्रो रक्त
हामी हावाको भक्त
हावा निचोर्दै निकाल्न
खोलौं घरको झ्याल र ढोका
धुरीमा त्यसै खेर गइरहेछ एक भारी हावा
उद्धार गरेर आँगनमा निकालौं
आँगनबाट आँपगाछीतिर हम्कौं
हावा खाऔं हावा
हावालाई नै पेलेर
तेल निकाल्ने उद्यमशीलता विकास गरौं
हावाको लागि फूलमाला उनौं
हावाको जयजयकार गरौँ
हावाको छुट्टै राज्य बनाऔं ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, April 23, 20110: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, April 17, 2011 1 : Comments
माथिको सम्बोधनसँगै उनलाई चिठी लेख्‍न चाहान्थेँ । तर पुग्नुपर्ने ठेगानाको अत्तोपत्तो भए पो ! यो जमाना पनि त घोरिएर, सम्झनाको चुल्ठोमा फनफनी बाटिएर धैर्यपूर्वक चिठी लेख्‍ने खालको अब रहेन ।
महान् कलाकार चार्ली च्याप्लीनको संवादविहीन कमेडी फिल्मको एक झलकसम्म हेर्नेमध्ये उनीसँग हेलमेल बढाउन नचाहने को पो होला र ? प्रत्यक्ष जम्काभेट असम्भव भए पनि सम्झनामा इतिहासको विरासत नै भएर उभिएका छन् उनी । सन् १८८९ अप्रिल १६ मा बेलायतमा जन्मिएका च्याप्लीनको एक सय २२औं जन्म जयन्ती मनाउने क्रममा छौं हामी ।
“The public never knows what it wants, only what it doesn't want.”
एक समयमा च्याप्लीन आफैंले भनेको कुरा उनीतिरै सोझियो । अर्थात् यही कुरा चाहान्छौं भनेर जनसाधारणले फर्माइश नगरे पनि आफ्नो कलाकारी खुबीले सबैको मुखमा बूजो लगाउन उनी सफल हुँदै गए । आफ्नो रुचिबारे उसबेलाका सर्वसाधारणको अज्ञानतालाई उनले कखरा नै पढाए भन्दा हुन्छ । सिनेमामा स्वराङ्कनको अडियो प्रविधि नभित्रिंदै बाजागाजा र हाउभाउकै मद्दतले छुट्टै शैली स्थापित गर्दै वर्चश्‍व राख्‍दै गए । गम्भीर विषयवस्तुमा समेत जटिलताको कुनै हाँगाबिंगाबिना सजिलै हाँसोको फोहोरा उनेका छन् उनले फिल्ममा । त्यसलाई उनको सफलता र परिचय दुवै मान्दा हुन्छ । यान्त्रिक जीवनशैलीको चपेटामा होशपूर्वक श्‍वास फेर्न र जिउनै बिर्सिन थालेका अचेलका मान्छेहरूको लागि उनको जस्तो फिल्मको खाँचो झन् बढी हुन सक्छ ।
जन्मको नाम Charles Spencer Chaplin भए पनि लोकप्रियतामा चम्किँदै गएपछि आंशिक परिचय नै काफी भयो उनका लागि । चार्ली भनेपछि पुग्ने भयो । कतिपय उनका फिल्म हल्काफुल्का हास्यमिश्रित पनि लाग्छन् । तर बिर्सिनै नसकिने द सर्कस (१९२८), सिटी लाइट्स (१९३१) लगायतका फिल्ममा उनले ठट्टैठट्टामा लट्टा पारेका छन् । हाँस्दाहाँस्दै दर्शकको आँखा आँसुले पुर्छ । मानवीय संवेदनाको गहिरो कुवा खनेका छन् तिनमा । संवेदनशील तार स्वस्थ भएको मान्छे हुरुक्क नभई बस्न सक्दैन । सर्कस फिल्ममा डोरीमा हिंड्ने कला देखाउने क्रममा भुत्तोभाङ कुनै सीप नभएको ‘रोप वाकर’ को रूपमा दयनीय हविगत झल्काउन उनले गरेको अभिनयको प्रशंसामा ‘वाह’ले मात्र पुग्दैन । यस्तै सिटी लाइट्स फिल्ममा गरिबीको मारमा पिल्सिएकी अन्धी केटीले खर्चको चाँजोपाँजो मिलेर नेत्रज्योति पाएपछि सहयोगी पुरुषसँगको पुनर्मिलनको क्षण पनि कम कारुणिक लाग्दैन !
आखिरमा चिन्यौ ? : फिल्म ‘सिटी लाइट्स’को एक दृश्य
प्रायजसो फिल्ममा आफ्नै लेखन र आफ्नै निर्देशन छ । कलाकारमा पनि त्यस्ता प्रतिभाशाली र कमेडीका हिरो छुट्ने कुरै भएन । सेतो सर्टमा टाई भिरेको, त्यसमाथि वेस्टकोट अनि कोट, ह्‌वार्लाङे सुरुवाल र हातमा बाँसको लर्किएको छडी । एउटा डल्ले झुसिल्कीरा कतै अलमलिएर बसे जस्तो छोटो जुँगा र डेक्ची जत्रो टोपमा ठाँटिएर चार्लीले आफ्नै परिचित शैलीमा ठुमुकठुमुक हिंड्न थाल्दा दर्शकको अनुहारभरि हाँसोको डन्डीफोर उम्रिइसक्छ । अझ कतिपय फिल्ममा त पृष्‍ठभूमिको सङ्गीत पनि चार्लीकै सुन्न पाइन्छ ।
जुँगे आइकनबिनाका च्याप्लीन र जुँगासहितका
कलाकारिता यात्रामा सङ्घर्षको कोलबाट पेलिएरै उनी खारिंदै गए । आमा हानाले डोर्‍याएको स्टेज शोको बाटोबाटै उनले चुलीतिरको गन्तव्य समाए । गायन प्रस्तुतिको क्रममा आमाको गलाले काम नगरेपछि पाँच वर्षे फुच्चे चार्लीले पहिलो पटक स्टेजमा दूधिला ओठ सुसेले । तर गायकमै उनको चाल रोकिएन, अभिनयमा उनको करिअर आठ वर्षको उमेरमा थालनी भयो । त्यसपछि पाँच फिट पाँच इन्चको केटोले चमत्कार गर्दै गयो ।
सन् १९७७ डिसेम्बर २५ मा बूढा चार्लीले देह बिसाए ।
जन्मदिनको हार्दिक शुभ कामना चार्ल्स !
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, April 16, 2011 1 : Comments
प्राइभेट जागिरेले सरकारीलाई हेरे जस्तै
डिट्ठा सा’बले विचारीलाई हेरे जस्तै
संविधानसभालाई सभासद्ले यसरी हेर्दैछन्,
दाइजोप्रेमी पुरुषले पियारीलाई हेरे जस्तै ।
हिमाल जस्तै कञ्चन छ हाम्रो माया भन्थ्यो
जलवायु परिवर्तनले कालो चट्टान बाँकी रह्‌यो,
तैपनि वचनमा अडिग छु भन्दै आधुनिक प्रेमीले
’माया कहिले गोरो, कहिले कालो’को नारा भाकिरह्‌‌यो ।
माइती छोड्दा तिमीले रुवाबासी गर्नू
घर भित्र्याएपछि रुने पालो मेरो
बिहेपछि मैं ‘बेड टी’ टक्र्याउँला
पिज्जाको बिल तिर्न नमान अप्ठेरो ।
अनिकालमा त कनिका पनि भातकै सिता जस्तो
मन रमाएपछि यतै‍ रमिता उतै रमिता जस्तो
चुनावअघि नेताको वाणी अहा कति गहकिलो,
जीवनकै द्वार खोलिदिने भगवद् गीता जस्तो !
नयाँ वर्ष २०६८ को अवसरमा सबै पाठक, ब्लगर र आत्मीय साथीमा शुभ कामना !
मुलुकमा अमनचैन देख्‍न पाइयोस् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, April 14, 2011 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, April 08, 2011 1 : Comments
सुटुक्क बिहे गरेपछि बच्चा पनि सट्याकसुटुक नै जन्माउनुपर्छ भन्ने केही छ ? तर भयो त्यस्तै । जमाना विज्ञापनको छ भन्दैमा सबै कुराको प्रचार गर्नु पनि त भएन । नितान्त व्यक्तिगत भन्ने कुरा पनि हुन्छन् जीवनमा । लुकाएँ सबैबाट । तर तत्कालका लागि धक र सङ्कोचका कारण गुटुमुटु बनाएर राखे पनि एक न एक दिन त यस्तो अपूर्व खुसीको कुरा सबैलाई बाँड्नु नै थियो । आज त्यही मनको सिउनी धरर उधार्न मन लाग्यो ।
छोरी सबनम आई हाम्रो काखमा । छोरा वा छोरीको भेद कहिल्यै पलाएन मनमा, छोरी जन्मिँदा खुसीकै हाँसोमा रम्यौं हामी दुई । बुढेसकालमा छोराले पालनपोषण गर्छ, छोरी त अर्काको घर गइहाल्छे भन्ने आदर्शको थेगो अब धमिराको दरबार भइसक्यो । राम्रो हुनु छ भने नौ डाँडापारि पुगेकी छोरीले पनि सहारा दिन्छे । छोरोलाई पुलपुल्याएर पाले पनि उसैबाट पछि प्रताडित बनेका बाबु-आमा पनि देखेको छु मैले । आमा-बाबुको लागि छोरा हुन् या छोरी, आफ्नो मुटुको कुन र कतिऔं ढुकढुकी मूल्यवान् भने जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ । फेरि हाम्रो कार्कीको वंशमा पहिलो सन्तानको रूपमा छोरी नै जन्मिएको रेकर्ड छ । केही गरी छोरा जन्मिए शिशु अवस्थामै अकालमै ज्यान गुम्ने गरेको छ । मेरो ठूलो दाइ बाँचेको भए पछिका हामी चार बहिनी-भाइलाई कति लाडप्यारले हुर्काउँथ्यो होला ! हामी पाँच जना हुन पाएनौँ । ठूलो दाइ बाँचेको भए सन्तानको कोटा पुगेर मैं पो जन्मिदैन थिएँ कि ? चार-चार सन्तान कसरी पो हुर्काएछन् बा-आमाले ? झन् मेरा हजुरबा र आमाले आठ बहिनी छोरी र चार भाइ छोरालाई कुन साहसले जन्माए मेरी बास्सै ! हुन त जिम्बाल बा थिए ऊ बेला, खर्चबर्चको कुनै फिक्रि थिएन । नोकरचाकर पनि टन्न छँदै थिए । बूढाको मुटु पनि दह्रै रै’छ नि !
मेरो बुबाको जस्तै मेरो पनि पहिलो सन्तान छोरी नै जन्मिएकाले सायद हामीले त्यस्तो अनिष्‍टको सामना गर्नुपरेन । पत्‍नीको रूपमा प्रिय साथी नै बनेर घर भित्रिएकी संजिताको आडभरोसा अतुल्य छ यसमा । साथमा कति घामपानीबाट सिक्दै आएकी मेरी आमाको आडभरोसाले पनि मेरो पारिवारिक रथ सम्हाल्न निकै काम गर्‍यो । हामी सानै छँदादेखि पूजा-प्रार्थनामा पनि हाम्रै भलोको कामनामा समय खर्चने आमाको ‘लाटो माया’को जति बखान गरे पनि कमै हुन्छ । उहाँकी नातिनी सबनम खिलखिलाउँदै हुर्किंदैछे । दूधले बलिया हुँदैगएका उसको नरम गिजाभित्र कुनैबेला आफ्नो औंला कर्‍याङमर्‍याङ चपाइन पुग्दा अपार आनन्द पाउँछु ।
घर-व्यवहारमा त्यति नघुलेको मान्छे म । धेरै काँचो थिएँ । बिहे गरेपछि सही लिक समात्‍न थालेको, छोरी जन्मिएपछि अझै जिम्मेवार र अरूका लागि पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने जीवनको अर्को सत्यसँग पनि एकाकार हुँदै आएँ । साँच्चै, खास खुसी आफू बाँच्नु र आफ्नै मात्र ख्याल गर्नुमा रहेनछ । मान्छे किन फूलबारी गोडमेल गर्छ, फूल फुलाएर सन्तुष्‍टिको मुस्कान मुस्काउँछ, बल्ल बुझ्न थालेको छु । आफू बाहिरको सौन्दर्य चिन्न र देख्‍न मान्छेलाई केही बेर लाग्दैन । बरू आफूभित्रको रहस्य झन्-झन् गहिरो हुन्छ । अरूको खुसीबाट आफूलाई भिजाउन सक्नुमा रहेछ जीवनको सार्थकता ।
“बिहे गर्नु र सम्बन्धमा बाँधिनु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो, तिमी बुझ्दैनौ” कुनै समय मैले प्रेमको प्रस्ताव गर्दा एउटी युवतीले ब्वाइफ्रेन्ड र श्रीमान्‌बीचको भेद खुलाउँदै मलाई अर्ती दिएकी थिइन् । तिनले यो ब्लग पढ्दैछिन भने म त्यस्तो श्रीमान् भएको चाल पाएर छक्क पर्नेछिन् । हो, तिमी पनि बुझ्दैनौ युवती, एउटा पुरुष मनमा ‘घर’प्रतिको भाव र सम्बन्धप्रतिको लगाव कति गहन र प्रेमिल हुन्छ, तिमी बुझ्दैनौ । म त्यही सतहमा छु अहिले ।
म जस्तो अलि आलोकाँचो पति पाएर हतास भई कि संजिता ? यही चिन्ता थियो मलाई । एउटा ‘घर’ नै बसाउने मेलोमा मान्छे लाग्दा यस्तो चिन्ता स्वाभाविक रूपले लाग्दो रै’छ । मैले सही साथ दिएको छु कि यत्तिकै ‘रिक्त स्थान पुरयेत’ पति जस्तो हुँदैछु भन्ने व्याकुलता पैदा हुँदोरै’छ । तर मैले डर पाले जस्तो त्यस्तो हतास छाया उसको अनुहारमा अझसम्म देखेको छुइनँ । मैले पनि त असल पति र कर्तव्यनिष्‍ठ पिताको भूमिका निर्वाह गरेकै हुँ । गर्दै आएकै छु । बच्चाको स्याहार र रेखदेख कसरी गर्ने भनेर काठमाडौँमा डेराको बसाइमा दिदी सुत्केरी भएपछि निकै बुझ्‍न पाएँ । बच्चा हुर्काउनु कति कठोर तप हो, कति कलात्‍मक सास्ती हो, नजिकबाट देख्‍न पाएँ । दिदी-भिनाजुको डेरा नजिकै मेरो पनि डेरा थियो । भिनाजु अफिस जाने भएकाले दिदीले खाना खान र लुगा धुन कोठा बाहिर केहीबेर निस्किँदा सुतिरहेको अवस्थामा पनि भान्जालाई हेरिदिनुपर्थ्यो मैले । ओढाइदिएको ओढ्ने र थाङ्ना कुन बेला हातले यता-उता चलाएर मुख छोपेर निस्सासिने हो कि भनेर खुब हेक्का राख्‍नुपर्ने ! यसैगरी सहयोगी भिनाजुले दिदीको हेरचाह र माया गरेको देखेर पनि त्यो छाप मालाई परेको हुनुपर्छ । कतिसम्म असल पारिवारिक भूमिका निर्वाह गर्न सकिने रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सिक्दै आइयो । अहिले त्यही काम लाग्यो ।
बेलाबेला छोरीले पिच्च-पिच्च सुरुवाल र थाङ्ना भिजाउँदा सुकाउने वा धुने काम पनि गरेकै छु । आमाको दूधले कुनै बेला नपुग्दा पोषणयुक्त लिटो पनि बनाएकै छु । चुरा बजेको हात थला परेर राम्ररी खट्न नसक्दा अस्तव्यस्त भएको कोठा पनि बढारकुँढार र टिपनटापन पारेर सपक्क मिलाएकै छु । हरदम आँऽऽऽ गरेर र्‍याल चुहाइरहने समस्या टार्न र्‍याले बाँधिदिएर मात्रै के गर्नु, हेरिराख्नुपर्छ कुन बेला लफक्क भिजेर अर्को फेरिदिने बेला भइसक्छ । सू गराउन पनि कमोडमाथि लगेर सूऽऽऽ गर नानू भनेर मैले लेघ्रो नताने कति थाङ्ना बिताइदिन्छे केटीले !
एक बेला मैले घरमा जुठो लोटाउँदै र थाल-भाँडा मस्काउँदै गर्दा मेरो काकाको छोरीलाई भनेको पनि थिएँ- “हेर् काली, मैले बिहे गर्ने केटीले सुख पाउँछे ।” कुरा सुनेर बहिनी खितखिताएकी थिई । नभन्दै त्यसले त मैले भनेको कुरा भिनाजुहरू सबै जनालाई फैलाइसकिछे । हुन पनि अहिले मेरी बुढियालाई हाइसन्चो छ ! ज्यान झिरिप्पै भएर हुनु न खानुको दुब्लो छ, केही गर्ने तागतै छैन जस्तो देखिन्छ भनेर मलाई पहिला उसले गरिरहने गनगन पनि अहिले बन्द छ । पहिले त मलाई लोसे, सुस्त र ढङ्गबिनाको देख्‍ने उही थिई । परिआउँदा सब गर्न सक्छु भन्ने जवाफ अहिले व्यावहारिक रूपमा दिँदैछु र संजिताको मप्रतिको हेराइ पनि अचम्म सँगले फेरिएको छ अहिले । माया र भरले यसरी हेराइ बदल्दो रहेछ ।
- “तपाई‌ त मायाको कुरा लेख्‍न मात्र जान्नुहुन्छ कि क्या हो ?”,
बिहे भएर आएको महिना दिनमा उसले छेड हानेकी थिई ।
नहानोस् पनि किन ? म खुल्नै सकिरहेको थिइनँ ऊ सँग । एउटै पलङमा सुतेको अजीव जोडी ३६ को कोणमा विपरीत रूपमा सुते झैँ हामी खै कहाँ हराएका थियौं । उसलाई म अनौठो लाग्ने, मलाई ऊ । मैले यसरी ब्लग लेख्‍दा ऊ चाहिँ उध्रिएको सलवार र कुर्ता सिउने ध्याउन्नमा घोरिएर बस्थी कुनामा । न सरोकार न जिज्ञासा जस्तो !
जे होस्, पछि भने छोरी चुम्बक भएर आई हामीबीच । हामी सायद फलाम-फलाम जस्तै ठोस थियौं । कुनै कारणबिना पनि टकराव भइरहने जस्तो । अहिले मेरो दुब्लोपनको क्षतिपूर्ति छोरी भएर आएकी छे, अस्ति एक साता अगाडि किनेर ल्याइदिएको जामा ठीक हुनै छाडिसक्यो । जहाँ म पहिले कुल्फी खान्थे, भुटेको चना फाँको हाल्थेँ, त्यही बजार चिर्दै अहिले म छोरीको लागि लुगाफाटो ल्याउँछु । कति फरक छ !
सबनम थिगिरी थिगिरी, ताते गर लौ ! नानी एक वर्ष पुग्‍न लाग्दा संजिता र मेरो भाका अचेल उस्तै छ ।
सायद यस्तैयस्तै खालको पति र पिता बन्नेछु कि म पऽऽछि !!!!
कहाँ छे होली मेरी संजिता ? छोरीको नाम सबनम नै राखूँला ? मैं पनि त्यस्तो सहयोगी श्रीमान् बन्न सकूँला ? पहिलो बच्चा जन्माएको त कुरा गरियो, तर जन्माउन चाहिँ कतिवटा जन्माउने ?
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, April 05, 2011 16 : Comments
कति-कति हतार छ ….
छैन भुइँमा खुट्टा
शताब्दीपछि आउने पर्वको स्वागतमा झैँ
तुलबुल-तुलबुल छ मन
कोही गाँसिरहेछन् खुब निमेकले
जगेडा राखेको कालो मोसोको अबीर
छँदैछ कि सिद्धियो,
खोई कुन सङ्ग्रहालयमा छ
राणाकालको छुलछुले कोर्रा
बिग्रिएका मेसिन जस्ता
जेलिएका दिमागको मर्मतमा
हामी खोल्नेछौं कारखाना
त्यो एक दिनभरि
जूनले गट्टा नखेले पनि हुन्छ
अल्लारे घामले रातो-तातो भावमा
नसन्काए हुन्छ झिम्के आँखा
अँध्यारो गुफाको यो राज्यमा
हामी निकाल्नेछौं सामूहिक लाभा
सल्कनेछ राँको हत्केलामा पौरखको
काँडा जस्तो उनीहरूको पैँतालाले
हामीलाई हतार छ
समयको खच्चड चढेर
कुरुप-कुरुप चालमा आइरहेका
करोड मुटुहरूको धुनमा
एक जमात मान्छेलाई
हेर्नु छ राम्ररी
गर्नु छ नराम्ररी मर्मत
हतार छ हतार ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, April 03, 2011 1 : Comments
काँचो धागोजस्तै नाता कतिखेर कुन कुरामा टुट्छ, पत्तै हुन्न । कुनै निर्जीव वस्तु भए बरू कसिएको गाँठो खिया परेर, कस जमेर अझै जब्बर बलियो बन्थ्यो होला । तर मानवीय सम्बन्ध यति नाजुक छ, विश्‍वास र भरको जग टिकाउ हुने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न । प्लास्टिकका सामान जस्ता हाम्रा प्लास्टिक-मनहरू ।
सन्दर्भ यहाँ युवा पुस्ताकी चर्चित गायिका अञ्जु पन्त र गायक पति मनोजराज सेवाको दाम्पत्य सम्बन्धको हो , जुन अहिले फाटोको मोडमा पुगेको छ । सेलिब्रेटीहरूकै पारिवारिक जीवनमा किन यस्तो तिक्तता र उतारचढाव आउँछ ? केही अगाडि वैवाहिक जीवन केही अगाडि नबढ्दै नायिका मनीषा कोइराला र पति सम्राटबीच गम्भीर खटपट भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसअघि नायक निखिल उप्रेतीले छँदाखाँदाकी श्रीमती छाडेर नायिका सञ्चिता लुइँटेललाई अर्धाङ्गिनीको रूपमा अँगाले । यस्तै नायिका रञ्जना शर्मा र निर्देशक श्याम भट्टराईको वैवाहिक सम्बन्ध बीचमा तनावले टुटेर पछि फेरि जोडिएको ‘फिल्मी कहानी’ पनि रोचक रह्‍यो नेपाली रजतपटमा ।
सेलिब्रेटीहरू चर्चाको केन्द्रमा रहने भएकाले उनीहरूबारेको सानोतिनो प्रसङ्गले समेत चर्को रूप लिने गर्छ । सर्वसाधारणको निजी जीवन खलबलिए पनि ती चर्चा बाहिरै रहेर सेलाउँछन् । भनाइ नै छ, लोग्ने-स्वास्नीको झगडा परालको आगो । झगडा र विवाद नै हो सायद पारिवारिक चुल्हो तातो बनाइराख्‍ने अगुल्टो । अति नहुन्जेल कुनै पनि कुराले अहित गर्दैन । सँगै रहेका भाँडाकुँडाहरू पक्कै पनि यता-उता ठोक्किएर बज्छन् । यसैले पारिवारिक व्यवस्थापन मिलाउने क्रममा हुने विवाद र झोंकाझोंक सामान्य नै हुन्छन् । तर चर्चाभित्र हुने भएकाले मात्रै सेलिब्रेटीहरूको पारिवारिक कलह सार्वजनिक हुने कुरा पूर्ण सत्य होइन । मानवीय अहङ्कार र पूर्वाग्रहले बिगार्ने हो सबै कुरा । अर्कोतर्फ सम्बन्धमा केही समय रहेपछि नयाँपन पाउन छाडेपछि त्यसबाट अघाउने र बन्धनको रूपमा लिने संस्कृति पनि बन्दैगएको छ । फलस्वरूप सम्बन्ध तोड्नु नै स्वतन्त्रताको एकमात्र द्वार हो भन्ने भावना विकसित हुन थाल्छ । सम्बन्धमा रहेपछि साथीलाई आफू जस्तै बनाउन र पाउन खोज्नु, आफ्नो विचार लाद्‌नु र आफ्नोबारे आफूले जत्तिकै गहन रूपले सोचिदियोस् भन्ने अपेक्षाले नै सङ्कटलाई जन्म दिन्छ ।
एउटा साधारण मान्छे चर्चाको शिखरमा पुग्ने क्रममा उसले पारिवारिक नसनातालाई टेक्दै गएर मात्र त्यो प्राप्‍ति सम्भव हुन्छ भनिन्छ । मलाई पनि यस्तै लाग्छ । उँचाइमा मान्छे यत्तिकै पुग्दैन, धेरै कुराको बलि चढाएको हुन्छ उसले यात्रामा । त्यसका लागि आफ्नै घर-परिवार र साथीभाइको सम्बन्धलाई लोप्पा ख्वाउन पछि पर्दैन । अधिकांश यस्तै प्रवृत्तिका हुन्छन्, सायद गर्नुपर्ने पनि त्यही हो कि ? सबै कुरा ख्याल गर्न र कसले के भन्ला भनेर फिक्री मान्दै अरूहरूको चित्त बुझाउन थाल्यो भने खुड्किलो चढ्न तागत नै नआउला । धक फुकाएर, लाज पचाएरै अचेल सर्वोच्च सत्ताको दौड हुने गर्छ । यसैले जीवनको लक्ष्य हात पार्नका लागि खटपट, रिसको आवेग, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बदलाको भावनाले जस्तोसुकै नरम बन्धनलाई पनि कुल्चिन तयार हुन्छ ।
सेलिब्रेटीहरूको हकमा यो कुराले झन् पखेटा फिंजाउँछ । कलाकार, गायकका प्रशंसकहरू आफ्ना प्रियको सफलता देखेर जिब्रो टोक्छन्, आदरले टाउको झुकाउँछन् । तर त्यसका लागि आफ्नो आदरणीय कलाकार र गायकले कतिसम्मको मिचाहा प्रवृत्ति अँगालेर आएको छ, छिपछिपेसम्म कुरा थाहा हुन्न । थाहा भयो भने सायद त्यो आदरको डिग्री धेरै हदसम्म चिसिँदो हो । मान्छेलाई घर-परिवारसँग सफलताले पनि दूरीको रेखा कोर्दै लैजान्छ । मान्छे सफलतातर्फ बढ्न थालेपछि ‘तिमी त बदलियौ यार’ भनेर अर्कै नजरले हेर्ने हाम्रो समाजको आँखा पनि अलि छुट्याउँदै लैजाने खालकै छ । सार्वजनिक चर्चा बटुल्ने र व्यापारिक लाभ लिने नाममा आत्मीयतालाई चटक्कै भुल्ने सहरी सभ्यताको गोडमेलमा लागेका छौं हामी । जीवनसाथी आफूभन्दा डेग अगाडि बढेको नसहने पुरुष अहम्‌को रोगी मानसिकतालाई पनि भाइरस जस्तै फैलाउँदैछौं ।
पति-पत्‍नीको आतमीयतालाई शङ्का र अहङ्कारले पनि खाने गर्छ । श्रीमती आफूभन्दा जान्नेसुन्ने र बढी कमाउने हुँदै गई भने असह्‌य हुने । कोही मान्छेसँग देख्यो भने चरित्रमै आशङ्का गर्ने । यो आम रूपमा पुरुष र महिला दुवैको रोग हो । झन् घर छाडेर देश-विदेशको यात्रामा गइरहने कलाकारहरूले आक्षेप र भाँडभैलो बढी नै सामना गर्नुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको परिबन्द र परिस्थिति नबुझ्ने परिवार र पेसागत सम्मान नगर्ने जीवनसाथी हुँदा मरेबराबरको सास्ती झेल्नुपर्छ । त्यस्तो सास्ती झेल्नुभन्दा एकल जीवन नै सहज हुने ठानेर धागो चुँडाउन पछि पर्दैनन् जोडीमध्ये एक । तर एउटा व्यक्तिको प्रकृति पनि सफलताको मातले उफ्रिने खालको हुन्छ । सफलताको लट्ठयाइले ऊ समाज, परिवारसँग नभिज्ने खालको हुन थाल्छ । ऊ समाजभित्रै रहेर पनि बेग्लिँदै जान्छ । केही रहरवश, केही बाध्यतावश ।
अञ्जु र मनोजको जीवनमा के त्यस्तो भयो, दुवैले मूल्याङ्कन गरेका होलान् । अर्को व्यक्तिलाई बुझ्न नसक्ने रोग सायद मेलमिलापको यात्रामा भिलेन हो । त्यो भिलेनले आपसी सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँ घटाउँदै लैजान्छ, आक्रोश र दिक्दारीको बोझ थुपार्न थाल्छ । अनि कुनै मोडमा एक्लै बाँच्न सक्दिनँ भन्ने मुखबाट अब सँगै बस्न सकिँदैन भन्ने नमिठो धुन निकाल्छ । यस्तो भएपछि छुट्नु नै ठीक हुन्छ । दुई जनाको कुरा मिल्नुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एउटा व्यक्ति आफैंमा कति ठीक अवस्थामा छ र खुसी छ भन्ने हुन्छ । व्यक्तिलाई ठीक छ, राम्रो अवस्थामा छ भने बल्ल युगल यात्राको कुरा आउँछ । सेलिब्रेटीहरूमा ट्राजेडीको शृङ्खलाको अन्तिम पात्र अञ्जु र मनोज नै बनून् । यी दुईको पनि सकभर वियोग हुने परिस्थिति नआओस् । कारण, सेलिब्रेटीलाई परेको असरले हाम्रो कलाकारी र साङ्गितिक फाँटले पनि मूल्य चुकाउन के बेर ? सेलिब्रेटीको सिको गर्ने हाम्रो किशोर तथा युवा पुस्ताले पनि के सिक्लान् ?
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, April 02, 20110: Comments
Labels: प्रसङ्गवश, सम्बन्ध
तीनवर्षे ब्लगिङ र आत्मस्वीकृति : यो अप्रिल फुल होइन
देखासिकीमा लेख्‍न सुरु गरेको ब्लगको यात्राले पनि तीन वर्ष पूरा गरिसकेछ । २००८ मा अप्रिल १ कै दिन पहिलो पोस्ट लेख्‍दा धन्न अप्रिल फुल भएर केही न केहीको बकवास भएर हराइनछु ! यसबीचमा ‘क्याफे मङ्गलम्’ को नामबाट सुरु भएको यात्रा अहिले साहित्यप्रधान ब्लगको परिचयमा ‘शब्द’ भएर लम्किरहेछ । नाम फेरिए पनि ‘साहित्य, समाज र संस्कृति’को तीन पाटोलाई लेखन दायराबाट छाडेको छैन । यतिबेला आएर म कुनै अहम् भाव राखेर दाबी गर्दिनँ, कमसलभन्दा कमसल साहित्य पनि लेखेँ होला । तर, समग्रमा विश्‍व, देश, समाज, छिमेकी र व्यक्तिहरूबारे लेख्‍दै आउँदा त्यति साह्रो गम्भीरता र जिम्मेवारी बोध गरेर लेखिएन कि जस्तो घरिघरि लागिरहन्छ । बुद्धिले जति भ्यायो, जे मन लाग्यो उही लेख्‍दै आइयो । लेखाइमा उन्मुक्त र निर्धक्क उडियो ।
कतिपय विषयमा दीर्घकालीन प्रभाव पनि सोचिएन होला, कतिपय कुरा अरूलाई पेच पर्नेगरी र ह्‌याकुलाले मिचे जसरी लेखियो होला । तर ढाँटेर लेखिएन । कतिसम्म भने, हल्का काल्पनिक रङ-रोगन लगाएर आफ्नै गुप्‍त प्रेम र वियोगका छटपटीहरू पनि दुरुस्तै यही ब्लगको ऐनामा राखियो, कुनै धक नमानी । त्यो प्रेम कुनै साँच्चै प्रेम नै थियो होला, कुनै भने अति अपेक्षा, आग्रहभाव, एकल स्वार्थ र आक्रोशको कट्टु पहिरिएको नाङ्गेभुतुङ्गे थियो होला । अर्थात् जस्तो प्रेम गरियो, उसरी ब्लगमा लेखियो ।
कहिलेकाहीँ लाग्छ - यतिसम्म पारदर्शी त म नभए पनि हुन्थ्यो ! तर ब्लग लेख्‍नु भनेको आफूसँगको कुराकानी रहेछ (कम्तीमा मेरो लागि यस्तै भइरहेछ) । यो अन्तरङ्ग साथी हो, जो सँग अनुभूतिका गहिरा ओढारहरूबाट कहिले सुस्तरी फुसफुसाउँछु र कहिले उत्तेजनामा चिच्याउँछु । सबैसबै सहिदिन्छ यसले, यसैले त बारम्बार यसैलाई सुनाउन मन लाग्छ आफ्ना अनुभूति र विचारका कुराकन्था ।
ब्लगको कुरा गर्दा पहिले आफ्नै विशेषता र आनीबानीबारे कुरा खोतल्दा ठीक होला । लेखन भनेको त व्यक्तिकै प्रतिकृति तथा प्रतिलिपि न हो । ब्लग पढ्दा मेरो ब्लगका अनियमित पाठकहरूले विविधताको स्वाद पाउँदैनन् कहिल्यै, एकरसताको सिलसिला हुन्छ लेखनमा । यो स्विकार्नुपर्छ मैले, स्विकार्छु । लेखाइको यही एकोहोरो शैली नै मेरो विशेषता हो क्यार ! लेखनमा धेरै स्वाद र विविधता नआउनुको कारण - मेरो विवेकको क्षेत्रफल सीमित छ । साथी सर्कल झन् सानो, आफैंमा मग्न हुन मन पराउँछु अक्सर । साथीभाइ र समाज नै हुन् तपाईँको लेखनका स्रोत । तपाईँ पर्यटक जस्तै तिनमा फन्को लाउनुहुन्छ, सरसङ्गत गर्नुहुन्छ र तिनबाट प्रभाव-छाप लिएर, कच्चा पदार्थ टिपेर शब्दमा उन्नुहुन्छ । म आफूमै खुम्चिन्छु भने नयाँ कुरा के दिउँला लेखनमा ? प्रश्‍न यही हो । पेसागत रूपमा पत्रकारितामा जब आएँ, बल्ल हो अन्तर्मुखीबाट बहिर्मुखीतर्फ मोडिंदै गएको । तर पूर्ण रूपमा बहिर्मुखी हुन सक्ने छुइनँ म, चाहान्नँ पनि । यो समाज र समय पूर्णरूपमा बहिर्मुखी हुन सुहाउँदो त्यस्तो विश्‍वासिलो र ढुक्क खालको छ भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्दैन सायद !
अँ त, मेरो लेखाइ अलि जटिल पनि छ रे ! छ नै । एउटी सँगीले भनेको कुरा अझै बेलाबेला सम्झिन्छु, “तिम्रो फलानो कविता तीन पटक दोहोर्‍याएपछि बल्ल अलिअलि बुझे जस्तो भो ।”
बुझिनकै लागि सायद लेख्दिनँ कि म ? बुझाएर कोही-कसैले बुझ्‍ने पनि होइन जस्तो लाग्छ । कक्षामा पाठ घोकाउने शिक्षकले जति नै गलाको नसा फुलाए पनि बरा विद्यार्थी पढाइकै लहरमा एकाकार भएर आफ्नो ग्रहणशीलता उदार पार्दैन भने के लाग्छ पढाउनेको पनि ? मेरो ब्लग लेखन र बुझाइको हिसाबमा त्यो नियम लागू नहोला । तर न म बुझाउनका लागि लेख्‍छु न आफ्नो पाण्डित्य प्रदर्शन गर्दै अलमल्याउनकै लागि लेख्‍छु । बस्, म लेख्‍छु । र सायद यही मेरो अलगपना पनि हो । भन्छन् नि, अलि ‘हटके से’ ! तर यो ‘हटके से’ बनाउने नाममा नियोजित रूपमा भाषिक जटिलताको ओइरो लगाउने गरेको छैन । बरू सम्प्रेषणीय र विशुद्ध नेपाली भाषाको वकालत गर्नमा एउटा मुठी मेरो पनि उठ्दै आएको छ ।
यी तीन वर्षसम्म मेरो ब्लगिङमा प्रत्यक्ष-परोक्ष साथ दिने अनि आलोचना र विरोधको स्वर उरालेर कुतकुत्याउने सबैलाई आभार ! नेपाली ब्लगर सर्कलमा कतिपयसँग सहोदर दाजु-भाइको जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध समेत बनेको छ, मेरो कमाइ यही हो ।
अन्त्यमा एक टुक्रा :
- तिम्रो तीन वर्षको छोरा
- एक फग्लेटा घडेरी
- हिमाल नाघ्‍ने चुली सपना
शब्दहरू बान्ता गर्ने
अभिव्यक्तिको रोग ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, April 01, 2011 13 : Comments